AU iyo Qaramada midoobey oo ficilo aan loo dul-qaadan karin ku tilmaamay weerarada Argagixisada – Radio Daljir
Seteembar 25, 2013 3:29 b 0
Geneva, September 25, 2013 – Qaramada Midoobey ayaa shaacisay in aan loo dul-qaadan doonin ficilada gurracan ee kooxda Al-shabaab iyo ururka Al-Qaacida ay ka wadaan dalal ka tirsan Afrika gaar ahaan dalalka gobolka Barriga Afrika ku yaala.
Nicholas Kay wakiilka Qaramada midoobey u fadhiya Soomaaliya oo saxaafada kula hadlay Geneva Swezerland, waxaa uu sheegay in ay Qaramada midoobey ka go?an tahay in la xoojiyo dagaalka lagu dabar goynayo kooxaha Argagixisada ah ee barriga Afrika.
Docda kale ururka midwoga Afrika ayaa khatar weyn oo wax ka qabasho u baahan u arka weerarada ururka Al-shabaab iyo kooxaha kale ee xiriirka la leh Al-Qaacida ay ka fulinayaan dalalka barriga Afrika, weliba weerarkii Westgate.
Gudoomiye ku xigeenka guddiga fulinta ee midowga Afrika Eristes Mwanja waxaa uu sheegay in dalalka AU ay ka go?an tahay joogtaynta dagaalka ka dhanka ah Argagixisada caalamiga ah ee gobolka faafay.
Qaramada midoobey iyo midowga Afrika waxay hadalkan jeediyey xili ay ururka Al-shabaab sheegteen weerarkii la soo afjaray ee Westgate Nairobi, kaas oo afar maalmood gacanta ku hayeen xubno ka tirsan shabaab oo dagaal yahano ah.